Inona no atao hoe leysmaniasis, diagnostika ary fitsaboana ny aretina | Tontolo alika
Ny Leismaniasis dia aretina iray izay nanjary be mpahalala bebe kokoa ary misy tranga bebe kokoa amin'ny faritra sasany amin'ny jeografia misy antsika. Izany dia satria ny aretina dia mifindra amin'ny bibikely mitsentsitra rà, izay mandalo ny Leishmania donovani ho an'ny alika. Ny olana dia aretina mora miparitaka izy io, ka sarotra ny mifehy, ary mety hahafaty na ho matotra be koa ho an'ny alika.
Indraindray ny Leysmaniasis dia tsy misy na soritr'aretina vitsivitsy fotsiny. Toy ny aretina hafa, ny famaritana amin'ny fotoana ilana azy dia afaka manampy betsaka ny alikantsika ary ny fitsidihana ny mpitsabo dia mila mandinika ny toetoetran'ny alika sy ny fitsaboana mety hitranga ao aminy. Fa amin'ny voalohany, amin'ny maha-tompony antsika dia tsy maintsy mianatra mamantatra ireo soritr'aretina sy aretina mety hitranga isika.
1 Inona no atao hoe leismaniasis
2 Fambara ny aretina
3 Diagnostika ny leysmaniasis
4 Fitsaboana ny aretina
5 Ny fisorohana ny tsara indrindra hatrany
Inona no atao hoe leismaniasis
Ny leismaniosis amin'ny kaninina na leishmaniasis amin'ny kaninina dia aretina iray izay fantatra koa amin'ny anarana hoe aretin'ny moka. Aretina parasitika izy io izay miteraka protôzônia mikroskopika izay entin'ny moka marina. Izany no antony tsy ananan'ny moka rehetra ity aretina ity, saingy azo lazaina fa misy faritra mety hahitana azy. Aretina mety hisy fiatraikany amin'ny alika io fa ny olona koa raha voakaikitry ny moka. Misy faritra izay tranga maro hafa no niseho, satria be kokoa ny moka mitondra ny protozoan. Ireo no faritry ny Ranomasina Mediterane, Huelva ary ny afovoan'ny saikinosy. Tsy midika izany fa tsy misy io olana io any amin'ny faritra hafa, fa tsy hoe matetika loatra.
Fambara ny aretina
Na dia misy aza ny alika izay tsy mampiseho soritr'aretina na tsy mampiseho afa-tsy ny sasany, dia misy ny soritr'aretina izay fahita matetika amin'ity aretina ity. ny olan'ny hoditra miaraka amin'ny dermatitis maina miaraka amin'ny fihenan'ny volo manodidina ny mason'ilay alika, sofina ary orony izy ireo no famantarana ny aretina indrindra. Miaraka amin'ny fotoana sy ny fivoaran'ny aretina, ny alika dia mampihena ny lanjany, izay mety hampidi-doza ny ainy, satria ny olana amin'ny voa ihany koa dia mahazatra. Noho izany, ny diagnostika aloha dia ilaina mba hanolorana fitsaboana palliative izay manampy ny alika.
Misy soritr'aretina hafa azo raisina mba hamantarana ny aretina. Ny lymph node dia mety hihalehibe. Azo aseho koa izy ireo olan'ny maso toy ny conjunctivitis na blepharitis. Mety hisy fahasimbana amin'ny lela sy ny atin'ny fahasamihafana miovaova. Amin'ny maro dia misy ny fihenan-danja sy ny fihenan'ny hozatra. Na izany aza, mba hamaranana ny fehin-kevitra dia tsy maintsy atao ny fitsapana mba hialana amin'ny aretina hafa mety hitranga.
Diagnostika ny leysmaniasis
Ilay matihanina amin'ny fiompiana biby no mila manadihady mifanaraka amin'izany, mihevitra ny soritr'aretin'ny alika azony ankasitrahana sy ireo izay fariparitanay. Ny diagnostika dia tokony hatao aorian'izay fandalinana serological, parasitolojika ary molekiola. Ny fahatongavana amin'ny diagnostika amin'ny alàlan'ny fijerena ny toetry ny alika fotsiny dia mety tsy ho vita, satria ny alika isan-jaton'ny alika dia asymptomatika. Ny mahazatra indrindra hamaritana ny leishmaniasis dia ny fitsapana ny immunofluorescence, fitsapana serolojika izay iray amin'ny be mpampiasa indrindra. Ny tavy na ny tadin'ny lymphode, ny urine na ny fitsapana amin'ny ra dia azo atao ihany koa.
Fitsaboana ny aretina
Taona maro lasa izay, rehefa voamarina ny aretina, ny euthanasia dia saika natolotra ho an'ny alika foana. Natao izany satria tsy misy ny fitsaboana izay mamono tanteraka ny protôzônia ampitaina. Saingy, amin'izao fotoana izao io aretina io dia voafehy kokoa ary tratra izany manamaivana ny soritr'aretina ary koa ny famindrana leysmaniasis miaraka amin'ny fanafody mety. Noho ireo fandrosoana ireo dia tsy ilaina intsony ny mamarana ny ain'ny alika, satria mety hanana fiainana ara-dalàna izy io ary tsy hitondra loza amin'ny biby hafa ao amin'ilay faritra.
Amin'ny fitsaboana ankehitriny, matetika izy ireo dia mampifangaro fanafody maro miaraka. Antimony, aminosidine, allopurinol, na pentamidine no matetika ampiasaina. Ny fampiasana antimony dia tena atolotra amin'ny alika asymptomatika, ary ny vokadratsiny dia mazàna averina. Ilay matihanina amin'ny fiompiana biby, izay miankina amin'ny fivoaran'ny aretina sy ny toetoetran'ny aretina, no mametraka ny fitsaboana tsara indrindra.
Zava-dehibe ny manandrana mitandrina ny hoditry ny alika amin'ny fotoana rehetra, manome hydration. Ho fanampin'izay dia mila misafidy zavatra tsara ianao fahana sy fahana matanjaka, satria matetika io aretina io no miteraka fihenan-danja. Etsy ankilany, ny fanaraha-maso matetika any amin'ny mpitsabo dia ilaina ny mahafantatra ny fivoaran'ny vatan'ny alika sy ny aretina. Mila manao fitsapana foana ianao raha te hahalala raha manana olana amin'ny voa, tsy fahampian-dra na tsy fahampian-tsakafo ny alika.
Ny fisorohana ny tsara indrindra hatrany
Ny olan'ny aretina toy ny leismaniasis dia ny aretina indray mandeha, ny alika dia tsy manana fanasitranana intsony, fa afaka omena fitsaboana izy ireo mba hampihenana ny soritr'aretina sy hisorohana ireo aretina sy olana hafa. Izany no mahatonga an'ireo tranga ireo foana soso-kevitra ny fisorohana, satria io no fomba tsara indrindra hiantohana ny fahasalamana hatrany ny alika. Zava-dehibe ny fahafantarana raha ao amin'ny faritra iray misy isanjato avo na ambany isika, satria raha faritra misy azy io dia tsy maintsy mitandrina tsara.
Amin'ny ankapobeny, ny zavatra mazàna atao dia ny fisorohana ny faritra mety hisy ny moka. Mandritra ny vanim-potoana fahavaratra dia rehefa misy ahiana lehibe kokoa. Ankoatr'izay dia tokony hialana amin'ireo toerana misy rano miandrona na faritra misy renirano izay misy moka be dia be. Tsy azontsika fantarina mihitsy raha mety hamindra ilay alika ireto moka ireto na tsia, ka raha miala amin'ireo faritra ireo isika dia hampidina ny valan'aretina. Etsy ankilany, raha mipetraka amin'ny faritra misy moka marobe isika dia ilaina ny mampiasa repellants manokana ho an'ny alika, ka tsy azon'izy ireo atao ny manisy ratsy azy raha milelaka ny hodiny. Misy ihany koa ny vozon'akanjoko izay manampy amin'ny fisorohana ny moka hanaikitra azy ireo, izay mety tena ilaina any amin'ireo faritra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Leysmaniasis, inona izany ary ny fitsaboana ny alika